Sajhasabal.com | Homeगुल्मीको रेसुङ्गा क्याम्पस आंगिक हुने समाचार पढ्दा पत्रकारलाई धम्की !
गुल्मीको रेसुङ्गा क्याम्पस आंगिक हुने समाचार पढ्दा पत्रकारलाई धम्की !
प्रेम सुनार । भदौ–१३, बुटवल। यो कस्तो विडम्वना ? गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस अब देखि आंगिक हुने समाचार रेडियोमा पढे बापत गुल्मीका केहि रेडियोकर्मीहरुलाई यहाँका केहि ठुला बडाहरुको धम्की ? राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएको उक्त समाचार वाचन गर्दा कसैलाई किन यस्तो टाउँको दुखाई ? हैन , कसैले यो क्याम्पस मेरो निजी लगानीमा खडा भएको पेवा हो , सरकारी हुन दिन्न भन्नु हुन्छ भने बेलैमा हकदावी गर्नु होस कोही त्यस्तो अन्यायमा पर्न हुन्न ।
गत आईतबार बिश्व बिद्यालयको आठौं साधरण सभा ( सिनेट ) ले मध्यपश्चिमाञ्चलका रेसुङ्गा क्याम्पस सहित १० वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने निर्णय गरेको कसैलाई पुष्टि चाहिए उहि गएर फोटो कपी गरेर ल्याए हुन्छ । जिम्मेवार संस्था विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डाक्टर महेन्द्रकुमार मल्लले पत्रकारहरुलाई गराएको जानकारीलाई समेत हल्ला सम्झीनेहरु को हुन ? उनिहरुको नियत के हो ? यस बिषयमा हामी समाचार बिश्लेषण लेख्न बाध्य छौं ।
यो त सवै गुल्मेलीहरुको मात्र होईन छिमेकी जिल्ला अर्घाखाची, वारी बाग्लुङ्ग र प्याठन सम्मका जनताका लागि खुशीको कुरा हो । यस्तो निर्णय संगै त्यस क्याम्पसमा संयुक्त रुपमा दिपावली गरिनु पर्ने तर त्यसको सट्टामा समाचार लेख्ने पढ्नेहरुलाई समेत सामाजिक सञ्जालबाट गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्ने तपाई गुल्मेली हो भने कस्तो खालको गुल्मेली ? र, राजनैतिककर्मी हो भने कस्तो खालको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ तपाई ?
सामुदायिक क्याम्पस भई रहँदा त्यस क्याम्पसले कति आर्थिक संकट ब्यहोर्नु पर्यो ? त्यस क्याम्पसलाई यहाँ सम्म ल्याउन कैयौं समाज सेवीहरुको कति योगदान छ ? उहाँहरु सबै सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ । कुनै एक राजनैतिक दल र ब्यक्ति बिशेषको मात्र यहाँ सम्म ल्याउनुमा योगदान छैन । सबै गुल्मेलीहरुको साझा प्रयास थियो र अहिले आंगिक सम्वोधनको निर्णय गराउनमा पनि कुनै राजनैतिक दल , कुनै नेता र मन्त्रीलाई मात्र यसको श्रेय जान्न ।
पन्थीले भने–‘ सिनेटले जुन निर्णय गर्यो यो स्वागत योग्य कुरा हो । त्यसले यस क्याम्पस आंगिक हुने बाटो खुल्यो । यो एकदमै खुशीको कुरा हो । कायन्वनमा केहि महिना लाग्ला त्यो प्रकृयागत कुरा हो । क्याम्पसमा पत्र आउन बाँकी छ तर सिनेटले निर्णय गरेको कुरा सत्य हो ।आखिर यहि होईन सत्य ? त्यही सत्य कुरा पत्रकारहरुले लेखेका हुन र रेडियोकर्मीहरुले त्यसैलाई पढेका हुन । रेसुङ्गा क्याम्प आंगिक भएको सुन्न मन छैन भने को कसलाई पनि छैन कान थुनौं ।
आश्था एक ठाउँमा हुन्छ । पेशा प्रतिको निष्ठा अर्को ठाउँमा हुन्छ । त्यो भए कुनै राजनैतिक दलका नेता वकिल पेशमा छन भने उनि आफ्ना कार्यकर्ताहरुको रक्षाका लागि त्यस पेशामा लागेका हुन ? हामीलाई त लाग्दैन उनले त्यस्तो गरे जस्तो । पेशा प्रति सवै प्रति न्याय गरेको पाउँछौं हामी । बढि धेरै संकिर्ण नबनौं । पेशाकर्मी सबैलाई साझा चस्माले हेर्ने बानी बसाल्नुस ।
के यहि हो लोकतन्त्र ? जुन कोही पेशाकर्मीबाट जान अञ्जान भुल पनि हुन सक्छ । त्यसलाई भेटेर र वा विज्ञप्ती मार्फत सच्चाउन सकिन्छ तर सामाजिक सञ्जाल र सार्वाजानिक स्थानमा गाली गलौज गरेर समाधान हुँदैन । कुन पेशाकर्मीले कहाँ निर गल्ती गरे ? आउनुहोस साझा एउटा हलमा समिक्षा गरौं । सच्चाउन पर्ने विषय सच्चाऔं । बस्न पनि जरुरी छ । चाँहिदाको भाँडो नचाँहिदाको ठाँडो उखान हुँदा तब न फलानो नहुँदा गए गुज्रेको ब्यबहार देखाईन्छ र पिडा हुन्छ ।
सम्बन्धितलाई सोध्धै नसोधी ‘बलात्कारीलाई बचाउन मन्त्रीको दबाव’ शिर्षको समाचार संप्रेषण गर्नेहरुलाई स्वाबासी दिनेहरु ‘बलात्कारीलाई उम्कीन नदिन मन्त्रीको कडा निर्देशन’ शिर्षको समाचार पनि पढ्ने र पचाउने कि ?